यस कारण साउन महिनामा मासु र रक्सी खानु त के हात पनि लगाउनु हुदैन ! धार्मिक र वैज्ञानिक कारण सहित - Riddle Nepal
By santosh On Jul 17, 2018
काठमाडौं — साउन महिनालाई विशेष पवित्र महिनाको रुपमा हेरिने गरेको छ । यस महिनालाई महिलाहरुले भने विशेष चाडकै रुपमा लिने गरेको छन् ।
विशेषत हिन्दुधर्मलम्बीहरुको लागि साउन विशेष हुन्छ । यस महिनाको सोमवार महादेवको व्रतबस्ने प्रचलन पनि रहि आएको छ भने यस महिनामा माछा मासु नखाने चलन पनि रहेको छ ।
पौराणिक मान्यता अनुसार साउन महिना देवताहरुका पनि देबता महादेब शंकर अर्थात् शिवको महिनाका रुपमा लिइन्छ । पार्वतीले साउन महिनाभरी निराहार रही कठोर ब्रत बसेर भगवान शिवलाई प्राप्त गरेकी हुनाले भगवान शिवलाई यो महिना बिशेष हुन गयो भन्ने पनि बुढापाकाहरुको मुखबाट सुन्ने गरिन्छ ।
हुन त शिवको पूजाआजा बालाचर्तुदशी – मंसिर, माघे संक्रान्ति – माघ, शिवरात्री – फागुन अक्षय तृतीया – बैशाखजस्ता अरु महिनामा पनि विशेष रुपमा हुन्छ ।
यद्यपि महिनाभरीनै शिवको पूजा हुने महिना भने साउन मात्र हो । हरेक महिनामा आउने चाडपर्व तिथिमितिको अर्थ महत्वपूर्ण छ ।
वर्षयाम चलिरहेको हुँदा शास्त्रमा बताइए अनुसार धान रोप्नु, साउने संक्रान्तिमा तुलो फाल्नु, साउने सोमबमरका दिन ब्रत बस्नु आदि काम भने पिता पुर्खादेखिको विश्वासमा साउन महिनामानै गरिन्छ ।
विवाहित भए श्रीमानको दीर्घायु र परिवारको सुख, शान्ति र प्रेमका निम्ति, अविवाहित भए असल श्रीमान पाउने उद्देश्यले साउनभरी भगवान शिवको पूजा – आरधना गरि ब्रत बस्ने गर्छन् ।
साउने सोमबार बिद्याका लागि पनि राम्रो मानिन्छ । शिवजिको पूजा–आरधना गर्दा महिलाहरुलाई असल श्रीमान प्राप्त हुने, व्यापार राम्रो हुने एवं किसानको खेतीपाती सप्रने विश्वास गरिन्छ ।
पहाडमा भने यो पर्व त्यती मान्ने र ब्रत बस्ने चलन थिएन । यद्यपि केही समययता भने तराई तथा भारतिय संस्कृति, टेलिभिजन, चलचित्र आदिको प्रभावले साउन अर्थात् साउने सोमबार एउटा पर्वको रुपमा बिकसित भएको छ ।
हरियो चुरा, हरियो बस्त्र लगाउने कुरालाई प्रमाणित गर्न सकिएको छैन । साउन महिना भरि हरियो चुरा, हरियो बस्त्र र हत्केलाभरि मेहन्दीले सजिएका किशोरी, युवती र प्रौढहरुलाई देख्दा हिन्दु संस्कृति, संस्कार र विश्वास अझ गाढा हुदै गएको छ ।
आजदेखी उपत्यकाभित्र नेपाली यमराजको आतंक बन्द !
एमसीसी र नेदरल्याण्ड्सविरुद्धको खेलका लागि नेपाली क्रिकेट टिमको अन्तिम सूची, को–को परे ?